Lelee folda Ọbá akwụkwọ ahụ, nke ndabara na MacOS Sierra | Esi m mac
Lelee folda Ọbá akwụkwọ, zoro na ndabara na MacOS Sierra
Ọtụtụ ndị ọrụ ndị, nke onye ọrụ Mac kwadoro, kpebiri ịgbanwe gaa na kọmputa Apple. Ha n'ozuzu ha na-achọ nkwekọ, yana ngwanrọ na ngwaike mepụtara iji na-emekọrịta ihe. Ndị mmepe MacOS maara nke a na Ha na-anwa ịme sistemụ arụmọrụ ka ọ bara uru ma dịkwa mfe maka ndị ọrụ ndị na-amalite njem ha na Mac mbụ ha.
Site na ndabara, onye ọrụ Windows na-abanye na folda sistemụ ahụ. Na MacOS, ọ bụrụ na ịmaghị ya nke ọma, ịnwere ike gbanwee ihe ị na-ekwesịghị ime, dịka: hichapụ faịlụ, ma ọ bụ bugharịa folda gaa ebe na-ezighi ezi, wdg.
Ikekwe maka nke a, na ụdị nke MacOS Sierra dị ugbu a, a na-ezobe folda ọbá akwụkwọ ahụ site na ndabara. Nke mbụ, gwa gị na onye ọrụ nkịtị agaghị echekwa folda a na-ekwu maka ya, mana onye ọrụ dị elu chọrọ ịmara ma ọ bụ hichapụ ozi na diski ike, nwere ike ịchọ ịnweta ya. Ihe nchekwa ahụ nwere data nkwado ngwa, caches na faịlụ mmasị.
Ya mere, folda ahụ zoro ezo, n'ihi na anyị enweghị ike ịchọta ya na nchịkọta nhọrọ ya: na menu elu, menu "Gaa".
Iji nweta ya anyị ga-eme ihe a:
Na menu Finder, pinye aka na “Go”.
Ozugbo e gosipụtara menu, anyị ga-pịa igodo «Alt» dị ka anwansi, nhọrọ Ọbá akwụkwọ ahụ pụtara, n'etiti etiti menu.
Bugharịa na-enweghị ịhapụ cursor na ọrụ na ị ga-ahụ otú ị nweta nchekwa nke onye ọrụ nọ n'ọrụ.
Dị ka oge niile, anyị nwere mkpirisi mkpirisi keyboard nke ahụ ga - enyere anyị aka ịnweta site na onye nchọta ahụ, ozugbo na folda Ọbá akwụkwọ nke onye ọrụ na - arụ ọrụ. Keyboardzọ mkpirisi keyboard a bụ: Iwu + Mgbanwe + L.
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na anyị chọrọ ịnwe nhọrọ nhọrọ ọbá akwụkwọ mgbe niile na ọrụ "Go" nke Onye Chọta, anyị nwere ike ịgbalite ya, n'ihi enyemaka nke Ọnụ. N'okwu a, usoro iwu ide ihe bụ ihe ndị a:
Dị ka oge niile, anyị na-akwado ka ị ghara ịmetụ ihe ọ bụla aka na folda Ọbá akwụkwọ, belụsọ na ị kwenyesiri ike na nke a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Lelee folda Ọbá akwụkwọ, zoro na ndabara na MacOS Sierra
Agbalịrị m ịhụ folda ahụ site na ịpị Wing na naanị ihe na - eme bụ na akara akara Iwu n'ihu Ogwe nwere nchekwa. Site Library folder ma ọ bụ ozi ọma na a n'ọnụ. Naanị m na-enweta ya site na ụzọ mkpirisi keyboard.
Errata na okwu gara aga: Gụọ Alt, ọ bụghị Ala.
Nri, ihe ikwuru na eme na nwelite ohuru nke 10.12.2.
Ehihie, ekele maka onyinye ahụ.
Ọ ga-amasị m ka Ọba akwụkwọ na-ahụ anya oge niile, mana iwu a: "chflags nohidden ~ / Library /" anaghị arụ ọrụ m na Terminal. Agbalịrị m ịgbanwe Ọbá akwụkwọ na Ọbá akwụkwọ, Ọbá akwụkwọ ... ma ọ nweghị
Ekele na Ekele na-aga n'ihu.
N'ezie. Ihe edere n’isiokwu a anaghị arụ ọrụ.
Zaghachi Omar Meneses
Ndị AirPod adịlarị n'etiti anyị, akwụkwọ ntuziaka ha kwa
Dabere na Apple, ekweisi BeatsX ga-abata na February